Ciyaartoyda Barcelona oo xalay Gebi ahaanba Qaadacay Xafladdii lagu bixinayay Abaalmarinnada La Liga – Gool FM
Ciyaartoyda Barcelona oo xalay Gebi ahaanba Qaadacay Xafladdii lagu bixinayay Abaalmarinnada La Liga
Haaruun October 25, 2016
(Barcelona), 25 Okt 2016 –Ciyaartoyda kooxda Barcelona iyo Madaxdooda ayaa xalay dhammaantood qaadacay oo soo xaadiri waayay Xafladdii lagu bixinayay Abaalmarinnadii 2015/16 ee xiddigihii iyo Tababarihii ugu fiicnaa kaddib markii ay liiska musharrixiinta Tababaraha ugu fiican ka waayeen macallinkooda Luis Enrique.
Warbaahinta Kubadda Cagta ayaa sheegay in Sababta Barcelona go’aankaas u qaadatay ay tahay kaddib markii Tababare Enrique oo kooxdiisu ku guuleysatay La Liga aan xitaa lagu soo darin liiska tababarayaashii u sharraxnaa abaalgudkaasi, iyadoo tababarihii ugu fiicnaa loo doortay Diego Simeone.
Lionel Messi ayaa loo doortay Weeraryahankii ugu fiicnaa, halka Suarez loo doortay Xidiggii ugu wacnaa ciyaartoyda Ajnabiga ah ee ka dheesha La Liga .
Carles Rexach oo ah Safiirka Barcelona ayaa xafladdaasi xalay tagay waxaana uu isagoo metelaya Barcelona soo qaaday abaalmarintii la siiyay Messi.
Waxaa la is weydiiyay su'aal ah 'Yaa ku guuleysan doona Kubadda Dahabka 2016?'
“Goolhaye Buffon ayaan siin lahaa Ballon d’Or sanadkan.”.